Wasiirka waxbarshada Puntland oo daahfuray Mashruuc ’Educatio is Light’
Garoowe:-Waxaa maanta Wasiirka waxbarshada dowllada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa uu daahfuray Mashruuc dhinac waxbarashada ah oo loogu magacdaray Iftiin ‘’Educatio is Light’’ oo ay maalgalinayso Midowga Yurub iyadoo hirgelinta mashruucaana ay iska kaashanayaan wasaarada waxbarashada Puntlland iyo Hay,adda Care International. Midowga Yurub ayaa waxaa ay mashruucaan ay ku bixiyeen ilaa 7.5 milyan oo lacagta yurub ah(EURO) waan mashruuc socon doona ilaa mudo saddex sano.
Xaflada lagu daahfurayey mashruucaan Educatio is Light ayaa waxaa ka soo qayb galay Madaxweyne ku xigeenka Puntlland , wasiirka waxbarshada Cabdi Faarax Siciid Juxa ,aqoonyahano iyo masuuliyiin ka tirsan wasaarada waxbarshada.
Wasiirka waxbarshada dowllada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa oo ka hadlay xaflada daahfurka ah ayaa sheegay in Midowga Yurub uu mashruucaan ugu deeqay Waxbarshada Puntlland wasaaraduna ay dejisay qorshihii ay arday badan uga faa’iidaysan lahaayeen.
Wasiirka waxbarshada dowllada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa dhawaan safari ku kala bixiyey Gobolka Karkaar, Haylaan, Gobolka Sanaag iyo Gobolka Bari isagoo kormeer ku soo maray iskuulo iyo goob waxbarasho una balan qaaday in wasaaradiisu ay wax ka qaban doonto cabshooyinka ka imaanaya xarumaha waxbarshada.